Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Hamad el Khairy
Hamad el Khairy waa hoggaamiyaha isla markaana waa xubin ka mid ah aassaasiyaasha Dhaqdhaqaaqa kooxda argagaxisada Mideynta iyo Jihaadka Galbeedka Afrika (Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJWA), sidoo kale loo yaqaano MUJAO iyo TWJWA). Khairy Mudadii uu Hogaanka hayay, xubnaha MUJWA waxay fuliyeen howl-gal afduub, weeraro argaggixisonimo, iyo af duub ay u geystaan diblomaati shisheeye. Khairy wuxuu sheegtey inuu mas’uul ka ahaa afduubkii dhacey bisha Abriil 2012 oona loo geystey todobo diblomaati Aljeeriyan ah oo Maali joogey, oo waxaa lagu arkey fiidiyow ay MUJWA soo saartey oo uu ku cabsi galnayo kuwa ururkiisa ka soo horjeeda. Bisha Janaayo 2012, Khairy wuu sheegey hadafka MUJWA in uu yahay in ay “shariicada ku soo daboolaan dhammaan Galbeedka Afrika.”
Doorkiisa hogaamiyenimo ka hor MUJWS, Khairy wuxuu xubin ka ahaa AQIM, isagoo qorsheyn jiray howlo argagaxisonimo oo lid ku ah Muriitaaniya. Bisha Oktoobar 2011 dhexdeeda, Khairy wuxuu amrey afduubka seddex qof oo shaqaalaha mucaawino Yurubiyan ahaa ee Aljeeriya joogey, iyagoo labana qori ay ku dhaawaceen. Khairy waxaa loo magacaabay inuu argagaxiiste yahay iyadoo la hiigsanayo Amarka Go’aan meel-marinta 13224 ee soo baxay 7 bisha Disember, 2012.
MUJWA waxaa la aassaasey bisha September 2011 dhexdeeda in ay qeyb ka tahay al-Qaacidada Dhulka Islaamka Magrib (AQIM) in ay gacan ka siiyo howlaha argagaxisonimo laguna baahiyo Galbeedka Afrika. MUJWA waxay fulisey weeraro dhowr ah iyo afduubyo, oo ay ku jirto weerar isbiimeys oo Tamanrasset, Aljeeriya ka dhacey bisha Maarso, 2012, kaasoo ay ku dhaawacmeen 23 qof. MUJWA sidoo kale waxay sheegteen in ay mas’uul ka ahaayeen afduubkii Kaneediyan Ambaasadoor iyo Wakiilka UN Robert Fowler. Dowlada Mareykanka Waxay 7 bisha Disember 2012 MUJWA u magacowdey in ay yihiin urur Argagaxiso Caalami ah Gaar ahaan u Magacaaban oo Guddiga Cuna-qabataynta Qaramada Middoobey ee al-Qaida waxay 5 bisha Disember, 2012 MUJWA ku dartey xiriirka AQIM ay la leeyihiin.
Taariikhda Dhalashada: 1970
Goobta Dhalashada: Muriitaaniya
Magacyada La Sheegto: Abderrahmane Ould Mohamed Lemin Ould Mohamed Khairy, Amada Ould Kheirou, Hamada Ould Mohamed Kheirou, Abou Qumqum